आइभिएफ प्रविधिबाट गर्भाधारण गर्दा वंशानुगत समस्याको पहिचान किन गर्ने? :: डा.नुतन शर्मा :: Setopati
आइभिएफ प्रविधिबाट गर्भाधारण गर्दा वंशानुगत समस्याको पहिचान किन गर्ने?
वरिष्ठ स्त्रीरोग तथा टेष्टट्युब बेबी विशेषज्ञ एवं ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन
आइभिएफ प्रविधिबाट गर्भधारण गर्दा वंशानुगत समस्याको पहिचान गर्नु निकै जरूरी हुन्छ।
गर्भाधारणपूर्व गरिने यस्तो परीक्षणले भविष्यमा जन्मने बच्चामा हुनसक्ने कुनै पनि प्रकारको वंशाणुगत समस्याबाट बच्न सकिन्छ।
यद्यपी सबैखाले बिरामीको लागि ’प्री जेनेटिक स्क्रिनिङ’ अर्थात गर्भाधारणपूर्व नै वंशाणुगत समस्याको अनिवार्य पहिचान गर्न जरूरी नहुन सक्छ।
बढी उमेर समूहका महिलाले गर्भाधारण गर्नुअघि ’प्री जेनेटिक स्क्रिनिङ’ गर्नु निकै आवश्यक हुन्छ।
जसको परिवारमा पहिले पनि शारीरिक वा मानसिक समस्या भएको बच्चा जन्मिसकेको छ वा वंशानुगत समस्या परिवारका अन्य सदस्यमा देखिएको इतिहास छ भने त्यस्तो परिवारले गर्भाधारण अगाडि नै अनिवार्य रूपमा प्री जेनेटीक स्क्रिनिङ गर्नुपर्छ।
आइभिएफ प्रक्रियामा गर्भाधारण अगाडि भ्रुणको जेनेटिक स्क्रिनिङ गरिन्छ र सो क्रममा भ्रुणमा कुनै वंशाणुगत समस्या छ कि छैन भन्ने परीक्षण गरिन्छ। पहिचान गरिसकेपछि स्वस्थ भ्रुणलाई आमाको पाठेघरमा राखिन्छ। जसले गर्दा भविष्यमा स्वस्थ बच्चा जन्मिने अवस्था रहन्छ।
सामान्यतः पुरूषको शुक्रकिट र महिलाको डिम्बलाई बाहिरी वातारणमा निषेचित अर्थात् फर्टिलाइज गरेर भ्रुणको विकास गरिन्छ। त्यसरी बन्ने भ्रुणमा धेरै कोषहरू हुन्छन्, जेनेटिक स्क्रनिङ गर्दा एउटा कोषलाई लिएर त्यसको परीक्षण गरिन्छ, यदि हामीले विकास गरेका भ्रुण जेनेटिक रूपमा स्वस्थ्य भए मात्र पाठेघरमा राखिन्छ।
जेनेटिक स्क्रनिङ आइभिएफ प्रक्रियामा मात्र हुने गर्छ। आइभिएफ प्रक्रियामा जेनेटिक स्क्रनिङले सफलता दरसमेत बढ्ने गर्छ।
कतिपय कुरा हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैन, बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था र शारीरिक बनावटले पनि गर्भाधारणको प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्छ।
आइभिएफ प्रक्रियामा आउने सबै बिरामीलाई यस्तो परीक्षण अनिवार्य पनि होइन र यहीँ परीक्षणकै कारण आइभीएफ प्रक्रियामा धेरै समय लाग्ने भन्ने हुँदैन।
नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय हस्पिटलमा कार्यरत वरिष्ठ स्त्री रोग तथा टेष्टट्युब बेबी विशेषज्ञ एवं ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन डा. नुतन शर्मासँग हामीले भिडिओ कुराकानी गरेका छौं।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १०, २०७८, २०:५६:००
समाज डेण्टलको पाँचौं शाखा सनसिटी पेप्सीकोलामा
ओम हस्पिटल र नविल बैंकबीच सहुलियत सेवा सम्झौता
अब नर्भिकमा पनि कोभिड खोप केन्द्र
नेपाल क्यान्सर अस्पतालको १० औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा ९५५ जनाको उपचार
अल्का अस्पतालले थप्यो दुई आइभिएफ विज्ञ